बलात्कार र मानिस बेपत्ता बनाउने बम्जन आश्रममा कसले गर्ने अनुसन्धान ? « News24 : Premium News Channel
बलात्कार र मानिस बेपत्ता बनाउने बम्जन आश्रममा कसले गर्ने अनुसन्धान ?
काठमाडौं । आँफूले सृष्टीको सम्पूर्ण रहस्य बुझेकाले आँफू गौतम बुद्ध भन्दा पनि माथि रहेको दाबी गर्दै आएका कथित लिटिल बुद्ध रामबहादुर बम्जन माथि यौन शोषण तथा बेपत्ता बनाएको आरोप लागेको छ । सेतोपाटी अनलाइनकोे खोज रिपोर्टिङपछि अहिले बेपत्ता भएका आफ्नतले जिल्ला स्थित प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरेका छन् । बम्जनको आश्रम गएका आफ्ना बुबा सञ्चलाल वाइवा बेपत्ता भएको भन्दै खोजिदिन मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका १४ महेन्द्र वाइवाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा निवेदन दिएका छन् ।
बम्जनको आश्रममा डोल्मो नामले परिचित हेटौंडाकी फूलमाया रूम्बा समेत बेपत्ता छिन् । यस्तै लामो समयदेखि बम्जनको आश्रममा बसेका बाराका सुरेश आलेमगर पनि २०७२ को भुइँचालोपछि बेखबर छन् । उनको खोजीका लागि बम्जनको आश्रममा पुग्दा आश्रमामा कति आउँछन् कति जान्छन् जानकारी नहुने जवाफ पाए ।
सुरेशको खोजीका लागि परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा निवेदन दिएको छ । २०६८ सालदेखि मकवानपुरकी पासाङ तामाङ पनि बेपत्ता छिन् । उनका परिवार बमजनको आश्रममा छोरीको खोजीका लागि पटक पटक पुगे तर केही खबर पाएनन् न बम्जनको आश्रमले कुनै जवाफ नै दियो ।
कुनै दिन नुवाकोटकी चिनीमाया डोल्मा तामाङ पनि रामबहादुर बमजनलाई भगवान मानेर बसेकी थिइन् । तर अहिलेसम्म न परिवारको सम्पर्कमा नआएपछि आश्रमसँग तामाङ कि शास देउ कि लाश देउ भन्ने आफन्तको माग छ ।
यस अघि नै आश्रममा आनि बन्न पुगेकी रौतहटी एक युवतीले रामबहादुर बमजनले आँफुलाई बलात्कार गरेको भन्दै आश्रमबाट भागेकी थिइन् । आश्रममा आँफू बलत्कृत भएको भन्दै उजुरी गर्न पुगेकी उनलाई दुई वर्ष अघिको घटना भएको भन्दै प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेन । बम्जनले सन् २०१२ मा स्लोभाककी एक महिलालाई दुई महिनासम्म बन्धक बनाएको आरोप लागेको थियो । र सन् २०१० मा १७ जना सर्वसाधारणलाई कुटपिट गरेको आरोप पनि लागेको थियो ।
बमजनकै आश्रमबाट मान्छे बेपत्ता हुन तर रामबहादुर बम्जन र उनको आश्रमले लामो समयसम्म चासो नदेखाउनुले बम्जन र आश्रम प्रश्न उठेको छ । साथै उनी माथि एक पछी अर्को गर्दै लागेको यौन शोषणका आरोपले आँफुलाई अन्य सबै धर्मका भगवान भन्दा आफु माथी भएको घोषणा गरेका बम्जन माथि छानबिन हुनु पर्ने माग उठेको छ । यद्धपी आश्रमले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सबै समाचारहरु गलत र नियोजित भएको भन्दै खण्डन गरेको छ ।